စက်ရုံရောဂါကုသမှု | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စက်ရုံရောဂါကုသမှု ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
သို့သျောလညျး,Drew et al. (1995)မီးခိုးကြောင့်မြင့်မားတဲ့ပြင်းအားကိုတွေ့-ရေအပင်ပေါက်ရန်အတွက်မှ inhibitory ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ပြန်လည်နိုင်&အလှနျရှကျကွောကျတတျသော;ဆည်မြောင်းကတဆင့်အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် duced(de Lang နှင့် Boucher,1993)အလင်းကို et al. (2009)မီးလောင်သောစက်ရုံပစ္စည်းကနေမီးခိုးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမြောက်မြားစွာမျိုးစိတ်အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်နှိုးဆွပေးကြောင်းအစီရင်ခံ.ထို့ကြောင့်,မီးခိုး-ရေ scarification ဆင်တူတဲ့လမ်းအတွက်အမျိုးအနွယ်ကိုကုတ်အင်္ကျီပေါ်မှာသရုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါ,အဆိုပါမြုံသန္ဓေသားကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ရေပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်နှင့်အောက်စီဂျင် uptake ရသောအားဖြင့်(Egerton&အလှနျရှကျကွောကျတတျသော;Warburton,1998).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/plant-disease-treatment.html
စက်ရုံရောဂါကုသမှု ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံရောဂါကုသမှု ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 52,000 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com